ဟောင်ကောင် Feeling - Zhuji Feihu ချည်မျှင်စက် Co. ,, Ltd မှ
သင်ဒီမှာပါ : နေအိမ် >သတင်းအချက်အလက် >သတင်း >အခြားသတင်းများသတင်းများ
အချိန်: 2019-02-18 hits:
ဟောင်ကောင်မြေကြီးပေါ်မှာလူဦးရေအများဆုံးသောနေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့စိတ်ကူးတည်ရာအရပ်နှင့်အတူ, သင့်ရဲ့နေထိုင်စဉ်အတွင်းအလုပ်ရှုပ်သငျသညျစောငျ့ရှောကျဖို့လုံလောက်တဲ့မြင်ကွင်းများထက်ပိုရှိပါတယ်.
ဟောင်ကောင်က high-tech သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဒါဝန်းကျင်ဆိုတော့တော်တော်လေးရိုးရှင်းထားပါတယ်. အဲဒီမှာလေ့နှင့်ဘတ်စ်ကားဟောင်ကောင်ကျွန်းအကြားသွားလာလွယ်ကူစေ, Kowloon, နှင့်နယူးနယ်မြေနှင့်အတူ 27 ကူးတို့လမ်းကြောင်းများ.
ဟောင်ကောင်မှာတော့, သင် Tsim Sha Tsui နှင့်ဗဟိုဒေသများရှိနေဖို့တတ်နိုင်သောအရပ်တို့ကိုမရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Tsim Sha Tsui သင်ဟောင်ကောင်ကြည့်ဖို့လိုအပ်သမျှနီးစပ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး option ကိုဖွင့်. သငျသညျကြယ်၏ရိပ်သာလမ်းမှလမ်းလျှောက်သွားနိုင်ပါတယ်, ကူးတို့ဖွငျ့ဟောင်ကောင်ကျွန်းကိုသွားသို့မဟုတ် MTR မှ. သာအနည်းငယ်ဘူတာကွာဖြစ်သောမိုင်း Kok.
Disneyland နှင့်သမုဒ္ဒရာပန်းခြံ – နောက်တဖန်သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကလေးနဲ့အတူထိတွေ့ Get. ကို Mickey Mouse ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု, ပင်လယ်ကိုသတ္တဝါများနှင့်သမုဒ္ဒရာပန်းခြံမှာဧရာမပန်ဒါတွေနဲ့ပျော်စရာရှိသည်.
ဖိုးလင်းကျောင်းတိုက် – ဤသည်ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွက်တည်ဆောက်ခဲ့ 1924, ထိုသို့ Lantau ကျွန်းပေါ်တည်ရှိပြီးရဲ့. ဒါဟာပိုပြီးလေ့တောင်ရှိ "ဗုဒ္ဓဘာသာဒမ်းအဖြစ်လူသိများပါတယ်။”
ဗစ်တိုးရီးယား Peak – ဒီ Peak ၏ထိပ်ရန်သင့်အားကြာ, ရာနေရာက 1,700 ပေရေအထက်တွင်. ဒီနေရာတွင်ဗစ်တိုးရီးယားဆိပ်ကမ်းနှင့် Kowloon ၏မိုးမျှော်တိုက်ကြည့်ရှုပတျဝနျးကငျြတောင်ကုန်း၏ဂုဏ်အသရေမှာ glaze နိုင်ပါတယ်. သငျသညျထိပ်ပေါ်မှာရှိပါတယ်ပြီးတာနဲ့, သင်မြို့သည်မည်မျှကျယ်ပြန့်များ၏အဓိပ္ပာယ်ရလိမ့်မယ်.
Madame Tussauds ဟောင်ကောင် – ဤအကြောင်းကို၏ဖယောင်းကိန်းဂဏန်းများထားပါတယ်တဲ့ပြတိုက်ဖြစ်ပါသည် 100 နာမည်ကြီးတွေ.
အလင်းများ၏တစ်ဦးကဆငျဖိုနီ – မှာညစဉ်ညတိုင်း 8:00 ညနေသင်လေဆာရောင်ခြည်မီးလုံးနှင့်အတူပြင်ပရှိုးပွဲအရမ်းလေးစားမိပါတယ်နှင့်ထက်ပိုမိုပါဝငျသညျနိုငျပါသညျ 40 အဆောက်အဦးများ.
သငျသညျစျေးဝယ်သို့ဖြစ်လျှင်, သငျသညျလမ်းပေါ်မှာစျေးကွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုရပါမည်. သွားကြဖို့အကောင်းဆုံးသောအရပ်တို့ကိုမ Stanley Market ကများမှာ, Ladies Market က, နှင့်ဘုရားကျောင်းလမ်းညစျေး.
သင် Causeway ဂလားပင်လယ်အော်မှသွားကြဖို့ရှိသည်မောလ်များနှင့်စျေးဆိုင်မှာစျေးဝယ်လိုပါက. Causeway ဂလားပင်လယ်အော်မှာသငျသညျလွတ်လပ်သောဖက်ရှင်လက်လီအရောင်းဆိုင်များကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်, အကောင်းဆုံးကိုဌာနစတိုးဆိုင်များ, နှင့် Times Square ကုန်တိုက်.
သင်တို့သည်လည်း Mongkok မှာစျေးဝယ်သွားနိုင်ပါတယ်. ဒီနေရာတွင်စျေးပေါဂျင်းဘောင်းဘီကိုတွေ့လိမ့်မည်, နာရီ, လက်ကိုင်အိတ်, နှင့်ဒီဇိုင်နာမူကွဲမိတ္တူ.
ဒင်းမ်ဆန်း – သငျသညျအများအားဖြင့်လက်ဖက်ရည်အိမ်များထဲမှာရှာတှေ့နိုငျ. ဒါဟာ braised ကြက်သားခွနေပုစွန်ဖြည့် har Gao ဖို့နေကြပါတယ်. သငျသညျလင်း Heung Teahouse မှာအကောင်းဆုံး Dim ခု၏တဦးတည်း၏အအရသာရှိနိုင်ပါသည်.
ကင်ငန်း – ဒီကျော်တစ်ဦးရောစပ်အတွက် marinated ဖြစ်ပါတယ် 20 နံ့သာများနှင့်မွှေးကြိုင်နှင့်လှော်သုံးပြီးမီးသွေး.
soy ငံပြာရည် braised ခို – ခိုတဲ့မှောင်မိုက်ဖြစ်, ပိုပြီးအရသာထို့နောက်ဘဲအတူအရည်ရွှမ်းအသား. ဒီအံ့သြစရာပန်းကန်တစ်အရသာရှိသည်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာအရပ် Fung Lam စားသောက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.
bi feihu အထည်အလိပ်စက် co ။ , ltd
လွန်ခဲ့သော : မိုင်ယာမီခံစားကြည့်ပါ
နောက်တစ်ခု : Kirby \_ 's Epic ချည်ခင်